Nagu saabsan - Hebei Chaoyue Standard Fastener Mold Co., Ltd.
Hebei Chaoyue Standard Fastener Mold Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2008,
oo ku yaal aagga warshadaha zhaogeda ee beihan Townhip renqiu Hebei. Wadarta maalgashiga 5 milyan ee doolarka Mareykanka ah, dhul daboolaya 12800 m2, aaga aqoon isweydaarsiga wax soo saarka oo ah 7200 m2. Agagaarka Bejing ilaa 150KM, Tianjin qiyaastii 100KM.
DAACADNIMADA, TALOOYINADA, TAYO WANAAGSAN, GUUL-GUUL, ADEEGA MACMIILKA, oo u hoggaansamaya falsafadda ganacsiga.Waxay u go'an tahay warshadaha xirayaasha oo qancisa macaamiisha kasta oo leh tayo wanaagsan iyo adeeg fiican.
Khadadka wax soosaarka waxaa lagu qalabeeyay xaalad ka mid ah mashiinada wax lagu duubo ee PVD ee horumarsan ee laga keenay Mareykanka.
Xarumaha kale ee la jaan qaada si loo dhexgeliyo khadka wax soo saarka oo dhammeystiran, sida fiilooyinka CNC, mashiinka mashiinka tooska ah, qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'CNC punch press', foornooyinka adag ee qallajiya, iyo mashiinnada kale ee CNC. qalabka kale ee baaritaanka, si loo hubiyo tayada wanaagsan ee alaabada.Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh iyo koox maareyn, waxaanna u adeegsanay habka wax soo saarka kumbuyuutarka xakamaynta, hirgelinta maaraynta ganacsiga casriga.Waxaan ka faa'iideysaneynaa softwares-kii ugu dambeeyay sida CAD / CAM, Solidworks , si loogu sameeyo tiknoolajiyada casriga ah injineerada waayeelka ah, khabiiro ku takhasusay daaweynta kuleylka iyo naqshadeeyayaasha aqoonta.
Shirkaddu waa howlaha ugu muhiimsan ee R&D
wax soosaarka iyo iibinta feer madax xarag leh dahaadhka TiAIN iyo samaysanka wasakhda. Heerarka GB, JIS, ANSI, DIN, BS, ISO. Noocyada madaxa fur ee ay ka mid yihiin Phillps, Slot, Pozi, Hexagon, Torx. Awoodda wax soo saarka sanadlaha ah illaa 2.5 milyan oo gogo 'oo loogu talagalay feerka labaad ee dheeriga ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaan si isdaba joog ah ugu dadaalleynaa hal-abuurnimo iyo hal-abuurnimo si loo horumariyo caaryado badan oo sax ah, waxaana ku guuleysanay sumcad wanaagsan suuqa, Gaar ahaan feerka labaad ee loogu talagalay qallajinta darbiga, JDW 270F, daahan madow 12 * 25, soo saarida boolal ku saabsan 150,000-180,000 gogo '.
Products Our daboolayaa feer labaad, Main dhinto,
Feerka ugu horeeya, Meydiyaha dhinta, Mindida gooyaha, Pin-garaaca-baxa, Xadhig duubku wuu dhintaa, gooyaa dhintaa, Sawirka sawirku wuu dhintaa. . Marka lagu daro tilmaamahan heerka ah. Qaab aan caadi ahayn ayaa sidoo kale lagu bixin karaa macaamiisha sawir & codsi.
Dooro Chaoyue mould Waxaan si wax ku ool ah u yareyn doonnaa caqabadaha iyo kharashyada ku xirnaanshaha wax soo saarkaaga iyo naqshadeyntaada.
Qanacsanaantaadu waa baacsiga weligiis ah ee dhammaan shaqaalaha Chaoyue, waxaan diyaar u nahay inaan noqonno lammaane lagu kalsoonaan karo iyo saaxiib daacad ah.